युट्युबरहरुकाे गुनासाे- ‘हामीलाई युट्युबे भनेर हेप्ने गरिएको छ’
माघ २४, काठमाडौं । शुक्रबार काठमाडौंमा ‘अनलाइन टेलिभिजन’का सञ्चालकहरुले एक भेलाको आयोजना गरे । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, तारानाथ दाहाल, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगाएतलाई बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा युट्युबरहरुले मुख्य गरी तीन प्रकारका गाली खानुपरेको गुनासो सुनाए । जसमा एक- हामीलाई युट्युबे भनेर हेप्ने गरिएको छ । दुई- युट्युबरहरु पत्रकार होइनन्, पैसाका पछि लागेका मान्छे हुन् भन्ने गरिएको छ । र, तीन- युट्युबरहरुले अश्लील भाषाहरु प्रयोग गरेर जे पायो त्यही सामाग्रीहरु पोष्ट गरेर पत्रकारितालाई नै बदनाम पार्न खोजिरहेका छन् ।
कर्यक्रममा उपस्थित युट्युबरहरुले आफ्ना कमजोरी सच्याउने र व्यवसायिक पत्रकारितामा जोड दिने प्रतिवद्धता जनाउँदै भने, ‘हामी पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध छौं । अब हामी आन्तरिक आचारसंहिता पनि बनाउने छौं । आचारसंहिता नमान्नेहरु आफ्नै बाटोमा हिँडुन् । तर, हामीचाहिँ पत्रकार आचारसंहिताप्रति प्रतिवद्ध रहनेछौं ।’
कार्यक्रममा भेला भएका युट्युबर एवं अनलाइन टिभीका सञ्चालकहरुले विषयवस्तु र शब्द छनोटमा ध्यान दिने, अश्लील शब्दहरु प्रयोग नगर्ने एवं पेशागत दक्षता वृद्धि गर्नेतर्फ सामूहिक प्रतिवद्धता जनाउँदै एउटा कमिटीसमेत गठन गरेका छन् ।
अनलाइन टीभी सञ्चालक एवं युट्युवरहरुले २५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेका हुन् । साथै आचारसंहिता तथा स्वनियमन समिति, सदस्यता समिति र विधान मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ । भेलामा ९४ जना अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालक तथा युट्युवर सहभागी भएको आयोजकले बताए ।
यसैबीच उक्त कार्यक्रममा बाेल्दै पुर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले अनलाइन टिभी वा युट्युबरहरुले जे पायो त्यही विषयलाई समाचारका रुपमा पस्कन नहुने सुझाव दिए । यदि यस्तो गरिरहने हो भने जेलमा भेट हुने गाउँलेले बताए ।
त्यस्तै पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले युट्युबर एवं अनलाइन टीभी सञ्चालकहरु प्रविधिको प्रयोगकर्ता मात्रै हुने कि पत्रकार हुने भन्ने प्रश्नको यसको छिनोफानो हुनुपर्ने बताए । दाहालले भने, ‘म त धेरै युट्युब कन्टेन्टहरुको प्रयोगकर्ता होइन, तर आलोचनाहरु सुनिरहेको हुन्छु । यसमा कुनरुपमा जाने ? इन्टरनेटमा टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने एउटा मान्छे हुने कि जर्नालिस्ट हुने ? जर्नालिस्ट हुने हो भने त्यसका जुन मूल्यमान्यताहरु विकसित भएका छन्, त्यसको जिम्मेवारी लिने हिसाबले अगाडि बढौं । योे कुराको छिनोफानो हुनुपर्छ ।’
प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले राज्यबाट अन्य मिडियालाई जे व्यवहार गरिएको छ, अनलाइन टेलिभिजनहरुलाई पनि त्यही व्यवहार गरिनुपर्ने बताउँदै भने, ‘सूचना प्रविधि विधेयकका नाममा वा साइबर कानूनका नाममा अनलाइन टेलिभिजनलाई विभेद गरिनुहुँदैन । पत्रकारका संघसंस्थाले पनि तपाईंहरुलाई चिन्नुपर्‍यो, त्यहाँ तपाईंहरुले मान्यता पाउनुपर्‍यो ।’
सम्पत्ति विवरणमा गोकुल बाँस्कोटाले कति सम्पति देखाएका छन् ?
बाँस्काेटा ७० करोड कमिसनमा मात्रै नडुबेकाे भन्दै विजय प्रकाश मिश्रले खुलाए अन्य थप कमिसन